» dia ny finoany no isaina… » – filazantsaramada
» dia ny finoany no isaina… »
Publié parfilazantsaramada	 juillet 20, 2012 juillet 20, 2012 Laisser un commentaire sur » dia ny finoany no isaina… »
Maro no karazana finoana misy eto amin’izao tontolo izao. Mety misy akony eo amin’ny fianantsika ihany izany. Ny tiana ambara eto anefa dia izay voalaza eto amin’ny Romana 4:5, 6b » Dia ny finoany no nisaina ho fahamarinana (Abrahama), …Sambatra izay voavela ny helony sy voasarona ny fahotany. Sambatra izay olona tsy isain’i Jehovah heloka ».
Abrahama dia olona tahaka antsika ihany!
Nanana ny fahalemeny izy. Fa ny fanekeny ny baiko izay omen’Andriamanitra dia anisan’ny nampihavaka azy! Ny finoana an’Andriamanitra tokoa dia ny fane kena ny iraka omeny ary manatanteraka izany iraka izany! Mety tsy fantatrao akory ny ao ambadik’izany iraka izany!
Misy ny fiankinana amin’ny ampahany be amin’Ilay Jehovah Andriamanitra nahary ny tany sy ny lanitra, ary nahary antsika. Mety teo koa ny fahaizana mihaino izay lazain’Andriamanitra, na dia eo aza ny ahiahy ny amin’ny izao tontolo izao. Hoy Jesosy hoe ny ondriko mihaino ny feoko! Tokony ho fantatra ny feo miteny amintsika! Tokony ho aintsika ny manavaka ny feo izay rentsika. Ny Soratra Masina dia efa nataon’Andriamanitra iresahina amintsika, ary ny fiainoantsika izay ambarany dia izany no miteraka ny finoana ao anatintsika! Koa rehefa mankato izany teny izany isika dia izay no ambaran’i Jesosy hoe ny Teny mitombo ao anatinareo! Koa raha tsy mitombo ao anatintsika izany Teny izany dia io no Ambaran’i Jesosy hoe mamono Azy! Ny zazakely dia miankina amin’izay mpitaiza azy, ary tsy manatsafidy izy raha mbola menavava! Isika dia tokony handray izany toeran’ny zaza eo anatrehan’ny mpitaiza azy. Ny an’ny zaza anefa mbola olombelona ihany no iankinany fa ny antsika dia Ilay nahary antsika no takiany hiankinantsika.
Iza io Jehovah Andriamanitra io?
Io Ilay Andriamanitra nitondra ny Isiraely niala tamin’ny fahandevozana! Io koa no mbola manome anao famelankeloka amin’ny alalan’ny Zanany dia i Jesosy Kristy. Tsy afaka miala samy irery amin’ny fahotana isika! Ny ran’ny Zanak’ondry no entina anadiovana antsika! Ny Marina (Jesosy Kristy) maty hamonjy ny tsy marina! Izy irery no manana izany fahefana izany! Hafa ny Ràny! Izany no entin’Andriamanitra hanaronana ny fahotantsika! Izy no manarona ny fahotana! Famindrampo izany, Fanomezana izany! Tsy hisain’i Jehovah ny helotsika!
Ny adidintsika dia ny mandray, ny mino, ny miankina Aminy! Izy no hanefa ny Fiantsoana antsika!
Publié parfilazantsaramada juillet 20, 2012 juillet 20, 2012 Publié dansUncategorized